Ahoana ny fomba fanamboarana marbra - Ikkaro
firosoana >> Ahoana no hanaovana azy >> Ahoana ny fomba fanamboarana marbra
Ahoana ny fomba fanamboarana marbra
Ny iray amin'ireo zavatra tiako indrindra hatramin'ny fahazazako dia ny marbra.
Nandany taona maro tamin'ny fahazazako nilalao aho, ary teny an-dalana, tsy dia ratsy mihitsy aho. Mbola manana kapoaka cola roa lehibe aho, feno ny marbres nandresy aho.
El dingana famokarana marbra Toa tsy dia be pitsiny izany, miempo ny vera, esorina ny baolina sy ny marbra. Fa ahoana no anaovana ireo sary anatiny ireo?
Mamela horonantsary tena manazava aho momba izany ny fomba fanaovana marbra. Ary manao hevitra vitsivitsy izay heveriko fa mahaliana.
Te hanasongadinana ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fizotran'ny fanamboarana tanana sy ny fomba kanto amin'ny fanapahana fitaratra aho.
Angamba ny fanapahana vera, amin'ny alàlan'ny fanamarihana ary avy eo vaky ny hovitrovitra dia azo esorina amin'ny endrika fitaratra hafa, toy ny sombin-javatra mahitsizoro, tavoahangy na hafa.
Fantatra fa ny egyptiana sy romana taloha dia efa nilalao marbra, baolina vita amin'ny vato, tanimanga na marbra.
Amin'izao fotoana izao dia vita tamin'ny vera izy ireo ary ireo, ankoatry ny filalaovana lalao, dia ampiasaina amin'ny indostria.
Ny tombony azo amin'ny vera dia satria mora sy mateza izy io.
Ahoana ny fomba fanaovana marbra indostrialy
ny indostria dia mandrendrika vera voajanahary sy marbra fitaratra hafa izay arian'izy ireo noho ny antony tsara.
Napetrany tao anaty lafaoro izy io tamin'ny 1204 ºC nandritra ny 16 ora. Arotsaka avy eo ambany izy ary manety ny fikorianan'ny vera vera isaky ny antsasaky ny segondra izay latsaka amina faritra izay hanjary marbra. Raha mila marbra misy habe samy hafa isika dia ahitsy ny fotoana fanapahana ilay volo mba hahazoana ampahana lehibe kokoa na kely kokoa.
Ireo fizarana dia latsaka amin'ny alàlan'ny hoppers mankany amin'ny roller vy mihodina. ny fihodinana dia manakana ny fizarana tsy hiaraka.
Haharitra 72 ora ny milamin'izy ireo.
Ny loko dia miforona ao anaty lafaoro miaraka amin'ny fidiran'ny rivotra izay mampiempo ny vera ary mifangaro ny loko.
Mampisaraka ny habeny marina amin'ireo fantsona ireo fantsona. Tsotra miaraka amin'ny fisokafana sasany, izay hianjera miankina amin'ny kaliberaly.
Ny marbra misy famolavolana sarotra kokoa dia vita amin'ny tanana.
Ahoana no fanaovana marbra amin'ny tanana
Manafana vera madio ao anaty lafaoro kely ilay mpanao asa tanana.
Avy eo dia vakiny ny vera miloko iray ary avelany ao anaty lafaoro mandritra ny alina ary avy eo dia maka sy mamorona koba miaraka amin'izy roa izy ireo, mamorona tadiny hatramin'ny 5m lava sy manify toy ny paty. Rehefa mangatsiatsiaka dia esory kely ary safidio ny loko isan-karazany afangaro amin'ny vera mazava.
Makà sombin'ity vera mazava voarendrika ity ary aforeto amin'ny gazety mando tsy miraikitra amin'ny vera. Aorian'ny famolavolana azy dia ahodinkodiny amin'ny tsipika miloko maro izay hiraikitra amin'ny tany ary averiny ao anaty lafaoro.
Avereno intelo ity dingana ity.
Avy eo mamorona bara iray hatramin'ny antsasaky ny metatra izay ho ampiasaina mba hahitana cores maromaro
Manampia sosona faharoa misy bara miloko matevina ary aforeto amin'ny vera mazava indray ny zava-drehetra, ataovy ao anaty lafaoro ary avy eo modely amin'ny tanana.
Farany asio sosona fahatelo. Ary efa mandrafitra ny vera amin'ny fitaovana sy vy sy bobongolo hazo izy.
Manamboara marbra golf 5 milanja baolina boribory, mifehy ny habeny amin'ny fandrefesana metaly manokana ho an'ny faritra.
Vantany vao vita, potehina ny vera ary tazomy ao anaty fantsona ny baolina hampisarahana azy amin'ilay faritra. Amin'ny kapoka kely dia misaraka ny marbra. Atsonika ilay vongan-tany izay nijanona teo amin'ilay niraisany tamin'ny fizarana ary avy eo tao amin'ny lafaoro 530ºC izay nalamina tsimoramora nandritra ny alina mba hanamafisana ilay horonan-tsary.
Ahoana ny fomba hanaovana tangram
Fanehoan-kevitra 8 momba ny "Ahoana ny fanaovana marbra"
28 Jona 2014 amin'ny 3:01 maraina
Tsy hita ny rohy anananao .. Manantena aho fa hahomby izany .. arahaba ..: D
26 Novambra 2014 amin'ny 10:53 hariva
Salama iza no anaranao
1 aprily 2015 tamin'ny 11:42 maraina
Lahatsary mahafinaritra. Ny marbra misy endrika ao anatiny dia azo amboarina amin'ny fomba mandeha ho azy ihany koa, saingy tsy mitovy lanja aminy ireo vita amin'ny tanana, ary ny marbra toa ireo ao amin'ny horonan-tsary dia heverinay fa tsy vita amin'ny fomba farany ihany.